यी ३ राशि भएका मानिस जो कसैसँग पनि झुक्दैन्न ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/यी ३ राशि भएका मानिस जो कसैसँग पनि झुक्दैन्न !
यी ३ राशि भएका मानिस जो कसैसँग पनि झुक्दैन्न !
मेष राशि: का मानिसहरु कसैमाथि भरोसा गर्दैनन् । कुनै पनि कुरालाई सधैं आफू मातहत राख्न सक्षम हुन्छन् । कुनै पनि कार्यमा आफ्नो निर्णय लागू गर्न चाहान्छन्, र धेरैजसो अवस्थामा सफल पनि हुन्छन् । यीनिहरु कसैसँग प्रभावित भएर आफ्नो जीवनको दिशा बदल्दैनन् ।२. बृश्चिक राशि:बृश्चिक राशिका मानिसहरु समर्पित र इमान्दार हुन्छन् । साथै यस राशिका व्यक्तिहरुको भित्र विद्रो ही भावना पनि प्रमुखताका साथ हुन्छ ।
३. कुम्भ राशि: कुम्भ राशि भएका मानिसहरुको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको के हो भने उनीहरु भावनामा बगेर कुनै निर्णय गर्दैनन् । यदी जरुर पर्यो भने यीनिहरु आफ्नो भावन र समवेदनाहरुको पनि वास्ता नगरी अगाडि बढ्न सक्छन् ।कुम्भ राशिका मानिसहरु धेरै रोचक र जिज्ञासु हुन्छन् । यीनिहरु बुद्धिमान पनि मानिन्छन् । यीनिहरु जि द्धी स्वभावका हुनुका साथै आत्मविश्वासी पनि हुन्छन् ।
४. मकर राशि : यो राशि सबैभन्दा उत्कृष्ट राशि मानिन्छ, किनभने यो राशिका मानिसहरुमा आत्म नियन्त्रणको भावना धेरै प्रबल हुन्छ । अन्य राशि भएका व्यक्तिको मकर राशिवालाहरुमा उत्कृष्ट तरिकाले सोच्ने र सम्झने क्षमता हुन्छ ।यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छन् । मकर राशिका मानिसहरुमा आत्मविश्वास धेरै नै हुन्छ । जस कारण यो राशिका मानिसहरु धेरै छिटो सफलता हासिल गर्न सक्छन् ।
काठमाडौंको टुँडीखेलमा संविधान दिवस मनाइरहँदा खुल्लामञ्चमा जनता खाना माग्दै (भिडियो)